Ahoana ny fomba fanadiovana borosy
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manadio ny borosiny sy ny spaonjy makiazy matetika, ary ny olona sasany tsy manadio azy mihitsy. Fa ny borosy makiazy maloto dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana sy fahasalamana isan-karazany, manomboka amin'ny mony ka hatramin'ny aretina E. coli. Ireo matihanina niresaka taminay - ao anatin'izany ny dermatologie, ny makeup-brush designe ...
Ny fizotry ny fanaovana borosy kosmetika
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-10-09
Fandraisana an-tsary ny fizotry ny borosy makiazy vita tanana, Raha ny tena izy, tsy fantatry ny olona ny antony mahatonga ny borosy makiazy Hakuhodo Japoney lafo vidy. Ny borosy makiazy avo lenta dia vita amin'ny tanana ary manana fepetra avo lenta amin'ny asa tanana - izany no antony lafo. Borosy makiazy avo lenta ...
Soso-kevitra borosy 18 ho an'ny endri-javatra asehonao
Manana ireo borosy makiazy mahafinaritra rehetra ireo ianao, saingy fantatrao ve ny fampiasana azy? Ny ankamaroan'ny vehivavy dia manana borosy makiazy vitsivitsy farafaharatsiny ao anaty vatasarihana fandroana sy kitapo makiazy. Fa manana ny mety ve ianao? Ary hainao ve ny mampiasa azy ireo? Mazava ho azy fa tsia ny valiny. Fampiasana sy fikarakarana ankapobeny 1 Streamlin ...
fomba fampiharana makiazy？
1. Atombohy amin'ny moisturizer. Na inona na inona karazana volonao (maina, misy menaka na mifangaro) dia zava-dehibe ny mihosotra na ny maraina na ny alina — ary aza hadino ny tabilao masoandro ao amin'ny tabilao faha-1 amin'ny maraina. raiso ny moisturizer ...
Inona no maha samy hafa ny puff makeup sy ny blender hatsaran-tarehy?
Fa maninona ianao no tokony misafidy spaonjy makiazy Dongshen amin'ny fanaingoana fanaonao? Ny spaonjy makiazy Dongshen rehetra dia vita amin'ny akora tsy latsa, izay manana fahatsapana malefaka sy malefaka. Ny Dongshen makeup blender dia afaka manome anao endrika malefaka sy miavaka ary koa mety amin'ny tarehy isan-karazany ....
Tokony hampiasa ilay borosy fototra ve aho aloha sa ilay borosy miafina aloha?
1. Fikolokoloana hoditra alohan'ny makiazy Alohan'ny makiazy dia tsy maintsy ataonao ny tena asa fikarakarana hoditra tena ilaina alohan'ny hametrahana makiazy. Aorian'ny fanasana ny tavanao dia handemana sy handemana ny hoditry ny tarehy izany. Ho an'ny toetr'andro maina io dia miteraka fatiantoka vovoka ary hahatonga ny makiazy ho marefo kokoa. Arotsahy ny crème de brische ...
Fantatrao ve ny fitandremana amin'ny fiharatana?
Voalohany: misafidy ny hiharatra amin'ny maraina Ny vao maraina no fotoana tsara indrindra hanaratra. Mandritra ny torimaso, noho ny metabolisma haingana, dia miafina mafy ny fihary atiny, izay mampitombo haingana ny volo. Taorian'ny alina "adala" dia ny maraina no fotoana mety indrindra "hampihenanaR ...
Ahoana ny fampiasana borosy miafina hanafenana ny kilemanao?
Ny borosin-koditra dia tokony hampiasaina araka ny filàn'ny mpanafina. Amin'ny lafiny iray, tandremo ny fotoana ampiasana azy, ary etsy ankilany, tandremo ny fomba fampiasana. Amin'ny fampiasana manokana dia tsy maintsy takarina ireto dingana manaraka ireto. Dingana 1: alohan'ny hametrahana makiazy + fanamasoandro ...
Hainao ve ny mitazona ny borosy fiharatana?
Lehilahy tsy mitandrina no tsy miraharaha ny fikolokoloana sy ny fanadiovana ny borosy fiharatana. Raha ny marina, ny vokatra toy izany izay mifandray mivantana amin'ny hoditra dia tsy maintsy mitandrina amin'ny fikojakojana sy fanadiovana. Noho izany, anio no hilazako aminao ny fikojakojana sy fanadiovana ny borosy fiharatana. Ny fahalalana mifandraika, gent ...
Ahoana ny fisafidianana ny borosy eyeliner marina?
Ataovy malefaka sy voajanahary ireo tsipika matevina na masiaka nosoratan'ilay eyeliner. Ny borosy eyeliner dia ampiasaina amin'ny fanitsiana makiazy aorian'ny fametahana azy. Ireo mpanao hatsaran-tarehy matihanina dia mahalana no mandoko ny eyeliner iray manontolo, indrindra ny eyeliner ambany. Ny sasany tsy mandoko fotsiny fa mampiasa eyeshadow fotsiny. Indraindray manantitrantitra ny h ...
Ahoana ny fomba hisafidianana borosy fototra mety aminao?
Borosy fototra miorina amin'ny zoro Ny faritra fisaka amin'ity borosy fototra ity dia somary mitsoaka, ary ny endrika zoro dia hahatonga ny volom-borona amin'ny lafiny iray amin'ilay borosy fototra, izay manamora ny fifampiraharahana amin'ny antsipiriany rehefa mametraka makiazy. Ny borosy fototra misy zoro dia misy volom-borona malefaka, avo ...
Ny fomba fampiasana sy fikojakojana ny borosy molotra Dongshen
Ny borosin'ny molotra dia afaka manitsy tsara ny aloky ny molotra, ary manintona ny moron'ny zorony molotra. Ahoana no ampiasantsika ny borosy molotra? Ity manaraka ity dia ny atin'ny fampiasana ny volon-tava molotra karakarain'ny tonian-dahatsoratra, antenaiko hanampy anao! Fampiasana borosy molotra rehefa mametraka lokomena dia alao antoka fa manomboka ...
© Copyright - 2010-2021: Zo rehetra voatokana. Vokatra mafana, Sitemap
borosy makiazy napetraka, Manaova borosy, Faritra fiharatra, Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave, Fitaovana makiazy,